> Resource > Talooyin > Sida loo Email Pictures sida Muqaal ah
Haddii qof i weydiiyo sida loo email sawiro dad ay saaxiibo yihiin, waxa jira siyaabo badan oo. Habka ugu fudud waa ku cadaadisaa sawirada, taasoo hoos u dhigi karaan tirada file picture sidoo kale ka samaysaa suurto gal ah in email sawirada mid ka mid lifaaqa.
Email sida slideshow ah sawirrada ? Waxa kale oo jira habab kala duwan si ay u ogaadaan fikraddan. Waxaad heli karo website-ka si ay u sameeyaan iyo kaydka sawirada slideshow. Just email link slideshow dadka kale ah si ay u soo booqan karaan oo ay daawadaan slideshow ah naftooda. Haddii aadan rabin inaad qaadato khatarta in ay geliyaan sawiro aad online, waxaad isticmaali kartaa aad jeceshahay software qaadashada slideshow si ay u abuuraan movie slideshow ah oo u soo dir lifaaqa. Dooro aad si ay email sawirada sida slideshow ah . Hadda bartaan sida loo sameeyo slideshow ah online iyo offline.
Samee Muqaal Movie soo dir via Email
Wondershare Flash Gallery Factory waa qalab samaynta slideshow fudud la interface user dareen leh iyo qaabab wax soo saarka dabacsan (Jabbuuti ama EXE) in loo sameeyo waxa suurto gal ah si ay u abuuraan ku filan yar slideshow in email . Iyadoo qalab, waxaad samayn kartaa slideshow ah oo kaliya qasabno yar: sawiro dejinta, dooran template ah oo la abuuro, oo waa diyaar u ah inuu email lifaaqa ah. Waxaad kaloo lagula talinayaa in ay ku cadaadisaa file ah oo aad hawadda file sida WinZip ama WinRAR si aad u hesho tirada yar ee file slideshow. Ka hor inta email aad slideshow, hubi in size file ma dhaafto xadka lifaaqa ugu badan ee adeegga email idinkaa iska leh iyo dadka qaata ee. Tusaale ahaan, Gmail oo keliya kuu ogolaanaya in aad lifaaqa ma ka badan 25 Mb ee size diro. Hoos waxaa ku qoran tusaale ahaan slideshow aad email u diri kartaa sida lifaaqa ah a.
Daawo arrimo dheeraad ah oo slideshow >>
Geliyaan sawirro iyo Samee Muqaal Online
Slide waa mid ka mid ah kuwa ugu caansan qaadashada slideshow online website iyo qaybsiga lacag la'aan ah. Marka slideshow ah loo abuuray, waxaad ka heli doontaa HyperLink ah, waxa uu. Sidaa darteed, waxaad ka mid noqon kara link this in aad email si aad qaataha kari slideshow maraya link slideshow ah. Slide sidoo kale kaa caawinaysaa in aad si deg deg ah duubey la saaxiibo on baraha bulshada sida Facebook wadaagaan. Sidaa awgeed, ayaad u baahan tahay inaad soo dirto sawirro sida slideshow? Ama kaliya wadaagaan sawirada on Facebook? Waa in aad.